सल्यान शारदा नगरपालिकाका कोरोना फोकल पर्शन रविन विष्ट
सल्यान, २१ साउन ।
यतिवेला कोरोना महामारीको प्रभाव र अवको रणनीतिबारे हामीले सरोकारवाला निकायहरुसंग कुुराकानी गर्ने गरेका छौं । त्यसै क्रममा यस अंकमा सल्यान शारदा नगरपालिकाका कोरोना फोकल पर्शन रविन विष्टसंगको कुराकानीलाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
यस्तो छ उहाँसितको कुराकानीः(प्रश्नोत्तर)
प्रश्नः शारदा नगरपालिका कोरोनामुक्त भएको भन्ने समाचार आईरहेको छ, के अब शारदा नगरबासीले सुरक्षित महसुुस् गर्ने अवस्था छ ?
उत्तरः आजको दिनमा संक्रमितहरुको संख्या सूून्यमा भरेको छ । यस अर्थमा केही सुरक्षित महशुुस हुुनुु स्वभाविक हो, तर संक्रमित थपिदैनन् भन्ने चाही होइन, अहिले पनि केहि संख्यामा मानिसहरु क्वारेन्टाइनमा छन्, तिनीहरुको रिपोट आउन बाँकी नै छ ।
प्रश्नः क्वारेन्टाइनमा कति संख्यामा छन् ?
उत्तरः अहिले जम्मा १०–१२ जना मात्रै छन् ।
प्रश्नः कोरोनाबाट मानिसहरु संक्रमित हुने गरेको भएता पनि मृत्युुदर भने त्यति बढ्न पाएको छैन । तपाइको बुुझाईमा के कारण हुन सक्छ ।
उत्तरः विशेष गरी भारत र तेस्रो मुुलुकहरुबाट फर्किनेहरुकै कारण कोरोनाको जोखिम बढेको हो । जब नेपालका सवै जिल्लाहरुमा समयमै लकडाउन गरियो, यसले गर्दा नै समुदायस्तरमा फैलिन नपाएको हो ।
विदेशबाट फर्किनेहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखिनुु, होम क्वारेन्टाइनमा राखिनुु र संक्रमितहरुलाई आइसुुलेसनमा राखिनुु लगायतका क्रियाकलापले कोरोना समुदायस्तरसम्म फैलिना पाएको छैन ।
जब व्यापक रुपमा फैलिन पाएन, तब नै मृत्युुदर पनि बढ्न पाएन । अर्को कुरा विदेश जानेहरु स्वस्थ र युवा उमेरका नागरिक हुन्, उनीहरुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढी भएका कारण मृत्युदर नबढेको हो । सल्यान र शारदा नगरपालिकाको सन्दर्भमा पनि त्यहि नै हो ।
प्रश्नः उसो भए लकडाउन नगरेको भए त भयाबहको स्थिति हुुने रहेछ है ?
उत्तरः हो, यदि समयमै लकडाउन नगरेको भए, स्थिति त निकै भयाबह नै हुनेथियो । लकडाउन र हामी सवैको सजगताले गर्दा समुदायस्तरमा रोग फैलिन पाएन ।
प्रश्नः तर लकडाउनले जनताको आर्थिक स्थिति चौपट पार्न थालेको, गरिबीका कारण आत्महत्याका घटनाहरु निकै बढेको जस्ता समाचारहरु आइरहेका छन् यसको विकल्पका कुराहरुबारे स्थानीय सरकारमा केही छलफल हुने गरेको छैन ?
उत्तरः हो, जनताको दैंनिकी निकै कठिन अवस्थामा पुुगेको छ । घरव्यबहार चलाउन मुश्किल पर्न थालेको छ र पनि महामारीबाट बचियो भने पछि कमाउन सकिन्छ भन्ने नै धेरैको बुुझाई छ । तर जसले यसलाई सामना गर्न सक्दैनन्, उनीहरु आत्महत्या गर्ने सोचमा पुुग्दछन् ।
प्रश्नः महामारी त कसैका लागि कमाउने अवसर पनि भएको भन्छन् त ? बजारमा मास्क र पञ्जा लगायतका विभिन्न वस्तुुहरुको विक्रिबाट व्यापारिहरुले खुवै लाभ लिएको भन्ने चर्चा पनि छ ।
सुुरु सुुरुमा रु.१० पर्ने मास्क रु. ३० देखि ५० सम्ममा विक्री गरेको खवर आइरहेका छन् । त्यस्तै रु.४०० मै पाईने पञ्जाको अहिले रु.११०० पर्ने गरेको छ । त्यस्तै कोरोनो परिक्षणका लागि आवश्यक सामग्रीहरुमा ठूलो अनियमितता हुने गरेका खवर आईरहेका छन्, यसलाई कसरी लिनुुहुन्छ ?
उत्तरः हो, सुुरुसुुरुमा निकै लाभ उठाए । तर यसमा बुुझुनुुपर्ने कुरा के छ भने बजारमा जब बस्तुको समस्या हुुन्छ, सवैको सहज पहुुँच पुुग्दैन, त्यसबेला स्वभावतः बस्तुको भाउ बढी हुन्छ ।
सुुरुसुुरुमा मास्क सवैतिर पाईदैनथ्यो, जसले कारोबार गरे उनीहरुले अलि बढि नै मूूल्यमा विक्री गरे । तर अहिले ति वस्तुुहरु सर्वसुलब बन्दै गएका छन् ।
धेरैलाई बास्तविक मुुल्यबारे जानकारी भैसक्यो, अब त्यसरी नाफा लिन सक्दैनन् । महामारी र संकटको बेला मानिसमा केही दया माया पलाउन सक्नुुपर्दथ्यो, तर बस्तुको भाउ स्वतः बजारले नै निर्धारण गर्ने अवस्थामा सवै कुराहरु स्वभाविक हुने रहेछन् । कसैको लागि पीडाको समय कसैका लागि अवसर पनि भैदिदोरहेछ ।
प्रश्नः कोरोनाले कस्ता व्यक्तिहरु बढी प्रभावित छन् ?
उत्तरः जुनसुकै रोगले पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएकाहरुलाई बढी प्रभाव पार्दछ । यतिवेला पनि तुलनात्मक रुपमा कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाका मानिसहरु नै बढी प्रभावित छन्, बुढाबुुढी र अन्य केही रोगसमेतले थलिएकाहरु बढी प्रभावित छन् ।
प्रश्नः यसको प्रभाव त लामो हुने देखियो ? कसरी चल्छ अब गरिब र पीडितहरुको दिनचर्या ?
उत्तरः कोरोना भाईरसको प्रभाव एक दुुई वर्ष नै हुन सक्छ । खोप तयार भई सवै देशहरुमा पुुग्न र सवै नागरिकहरुको पहुुँचमा पुुग्न लामो समय लाग्न सक्छ, तसर्थ त्यतिवेला सम्म नै कोरोना संक्रमणको जोखिम रहिरहन्छ । हामी सवैले सामाजिक दुुरी कायम गर्दै सचेतना अपनाएर जोगिनुुपर्ने हुुन्छ ।
संक्रमित तथा सम्भावित संक्रमितहरुबाट सकेसम्म टाढै रहेर जोगिनुुपर्ने हुुन्छ । यो संकटको बेला मानिसको जीउज्यान नै सवैभन्दा महत्वपूूर्ण हुन जान्छ, आम नागरिकलाई आर्थिक रुपमा सबल बन्न अब केही समय लाग्ने नै देखिन्छ ।
प्रश्नः अन्तमा के सल्लाह दिनुुहुन्छ, शारदा नगरबासीहरुलाई ?
उत्तरः यो समय कोरोनाको जोखिम युुक्त समय छ, अँझै पनि निकै सजगता अपनाउनुपर्ने अवस्था छ । पहिलो कुरा स्वास्थ्य नै भएकोले स्वस्थ रहन हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने हुुन्छ ।
चाडपर्व मनाउदा, बजारमा निस्कदा र हाम्रा संस्कार एबं संस्कृतिहरु मनाउदा पनि सचेतता अपनाउने गरौं ।
आर्थिक अवस्ता कमजोर भएको अवस्थामा पनि धैर्य गर्न सक्नुुपर्छ, स्वास्थ्य राम्रो भयो भने मानिसले पछि पनि कमाउन सक्छन्, त्यसैले महामारीबाट जोगिन हरसम्भव प्रयास गरौं, सजगता अपनाऔं, यहि भन्न चाहन्छुु ।
बजार तताउदैछ, ‘साह्रै मन अत्याउने’ लोक दोहोरी गीतले (1,515)
कोरोनाले मृत्यु भएमा शब के गर्ने ? मन्त्रालयले यस्तो बनायो १९ बुँदे नियम (966)
विश्व प्रसिद्ध आँखारोग विषशज्ञको जीवनी एक सल्यानीद्वारा विमोचन (646)
श्री जनता मा. बि रागेचौरको कृषि भबनको सामाजिक परिक्षण सम्पन्न (596)
“जीबन कथा” (594)
बनगाड कुपिण्डे ५ मा नेकपाको सपथग्रहण
सल्यान, ९ असोज । सल्यानको बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकाका नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सपथग्रहण तिव्र […]
अस्पतालका विरामीलाई फलफुल प्रदान गरेर सल्यानमा सामाजिक सेवा दिवस
सल्यान, ८ असोज । ४१ औं सामाजिक सेवा दिवसको अवसरमा सल्यान अस्पताल सल्यानका बिरामीहरुलाई फलफुल […]
सल्यान, ८ असोज । सल्यानमा स्वास्थ्यकर्मी सहित ४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । […]
तत्कालका लागि मन्त्री बन्ने बाटो रोकियो, संवैधानिक इजलासबाट टुंग्याइने काठमाडौँ, ८ असोज । पार्टीभित्र […]
स्याङ्जामा पहिरोमा पुरिएर पाँच जनाको मृत्यु, चारजना बेपत्ता
कपुरकोट गाउँपालिकाका २१ टोलमा नेकपाको कमिटी निर्माण